အသင့်စား ခေါက်ဆွဲတွေက အရသာ ကောင်းပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါ - Hello Sayarwon
အသင့်စား ခေါက်ဆွဲတွေက အရသာ ကောင်းပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါ
ကိုရီးယားကားတွေကို ကြည့်လိုက်တိုင်း စားချင်မိတဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လွယ်လွယ်ကူကူဆိုပြီး ကလေးက လူကြီးတွေအထိ အလွယ်တကူ စားမိနေတဲ့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေက ပြင်ဆင်ရတာ လွယ်ကူသလို စားရတာ ပူပူနွေးနွေးနဲ့အရသာရှိပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ တကယ်ကို မသင့်တော်ပါဘူး။
တာရှည်ခံဆေးတွေ နဲ့ အသွင်အပြင်လှလှပပ အရသာပြည့်ပြည့်ဝဝ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေကို အချို့သော သားသားမီးမီးတွေက မပြုတ်ဘဲ ဒီအတိုင်းချိုးခြေ၊ အမှုန့်တွေနဲ့ နယ်ပြီး စာနေကြတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါက ကလေးတွေမစားသင့်တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးပါ။ လတ်တလောတော့ ဘာမှ မဖြစ်လို့ သတိမထားမိပေမယ့် ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုတွေများ ထိခိုက်စေနိုင်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါမယ်။
အသင့်စားခေါက်ဆွဲ တကယ်ပဲ ဆိုးသလား………
အသင့်စားခေါက်ဆွဲတွေက အာဟာရမပြည့်ရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး။ ခေါက်ဆွဲ အစားများတဲ့သူတွေမှာ ကင်ဆာလိုမျိုး ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမားတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်လို့ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ အသင့်စားခေါက်ဆွဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ အချို့သော အရာတွေကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုများ ထိခိုက်စေလဲ……….
အသင့်စားခေါက်ဆွဲတွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အာဟာရစုပ်ယူမှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေရုံတင် မဟုတ်ဘဲ အစာကြေချက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပါ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အစာကြေချက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်စေဖို့ အာဟာရဓာတ် နဲ့ သတ္တုဓာတ်များစွာ လိုအပ်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ် လုံးဝမပါတဲ့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲတွေက ဝမ်းချုပ်တဲ့ပြဿနာကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ် နဲ့ အူကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသေးတယ်။
အသင့်စားခေါက်ဆွဲမှာပါတဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Propylene Glycol က အသည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်စေသလို အသည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အနေနဲ့ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲတွေကို မစားသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲတွေမှာပါတဲ့ တာရှည်ခံ ပစ္စည်းတွေက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေနိုင်တာ​ကြောင့်ပါ။
Propylene Glycol ပါဝင်နေမှုက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အချိုမှုန့်လို့ သိကြတဲ့ MSG ပါဝင်တာကြောင့် ခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ MSG ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရော ဦးနှောက်အတွက်ပါ မကောင်းပါဘူး။
အရသာရှိအောင် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲမှာ အချိုဓာတ် ပါဝင်မှု မြင့်တာကြောင့် ဆီးချို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ ဟော်မုန်း ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်တယ်
အမြဲလိုလို အသင့်စားခေါက်ဆွဲကို စားသုံးမယ်၊ အလွန်အကျွံစားသုံးမယ်ဆိုရင် ဆိုဒီယမ် ပါဝင်မှု များတာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ ဟော်မုန်း ပြဿနာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အသင့်စားခေါက်ဆွဲမှာ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းတွေ များစွာပါဝင်နေပြီး အမျိုးသားတွေမှာ ကလေးရရှိနိုင်စွမ်း ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
အသင့်စား ခေါက်ဆွဲမှာ ဗီတာမင် ပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့် မကြာခဏ စားမယ်ဆိုရင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်စေဖို့ အားပေးရာရောက်ပါတယ်။
အသင့်စားခေါက်ဆွဲ စားမယ်ဆိုရင် အပေါ်က ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ တာရှည်ခံစေဖို့ နဲ့ အရသာပြည့်ဝစေဖို့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲမှာ ဖန်တီး ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ ဓာတု ပစ္စည်းတွေက အချိန်ကြာမြင့်စွာ စားသုံးမယ်ဆိုရင် ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်စေတာမျိုး အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
The Dark Side of Instant Noodles: What Makes Them Harmful? https://food.ndtv.com/food-drinks/the-dark-side-of-instant-noodles-what-makes-them-harmful-766902 Accessed Date 17 May 2020
Are Instant Noodles Bad for You? https://www.healthline.com/nutrition/instant-noodles Accessed Date 17 May 2020
10 side effects of danger eating instant noodles https://steemit.com/esteem/@taufik93/10-side-effects-of-danger-eating-instant-noodles-4716b0b8d7a9c Accessed Date 17 May 2020
What Will Happen To Your Body When You Eat Instant Noodles? https://www.lifehack.org/361298/what-will-happen-your-body-when-you-eat-instant-noodles Accessed Date 17 May 2020